Izindaba - Ukuqhathaniswa kwemizila yenqubo yokukhiqiza eMkhakheni weBOPET
Okwamanje, kunemizila emi-2 ehlukene yokukhiqiza embonini yeBOPET, enye inqubo yokusikeka, enye iyancibilika ngokuqondile.
Ngaphambi kuka-2013, imakethi yayisuselwa kakhulu kwinqubo yokusikeka, kuthi ngemuva konyaka ka-2013, kwethulwe inqubo yokuqoqa imihlambi. Ngokwezibalo zikaZhuo Chuang, ngasekupheleni kukaSepthemba 2019, inani eliphelele lokukhiqiza leBOPET eChina lalingamathani ayizigidi eziyi-3.17, futhi amandla okukhiqiza okusebenza okuhlanganisiwe okuqondile ahlanganisa cishe ama-30% emali yokukhiqiza ephelele, kanti engama-60 esele iyonke I-% yomthamo wokukhiqiza ibingamathuluzi wokomisa.
Cha. Wentambo ngqo
AmakhonoOns Amathani / Unyaka）
Izindleko zokusikwa kwenqubo liphansi kunalezo ezincibilikisiwe eziqondile, cishe i-500 yuan ngethani ngalinye. Ngakho-ke, inenzuzo eqinile emkhakheni wefilimu ejwayelekile. Njengamanje, amabhizinisi amathathu aphezulu embonini anezinto zokuqinisa umthetho ezine, iJiangsu Xingye, i-Yingkou Kanghui ngabathengisi beTop 3 embonini yeBOPET eChina, kanti isabelo semakethe sefilimu ejwayelekile simbalwa. Ngokukhiqizwa kweNgobo Jinyuan, uFujian Baihong, uZhejiang Yongsheng noShuyang Genzon bajoyina imboni, kuye kwenziwa iphethini entsha yokuncintisana emkhakheni weBOPET, kodwa izindleko zokuncintisana zizonke zisobala kakhulu kunendlela yokusika.
Kunokubili okuhle nokubi kulezi zinqubo ezimbili. Yize inzuzo yokuncibilika ngokuqondile emkhakheni wefilimu ejwayelekile ingcono, umugqa wokulinganisa inqubo unezinzuzo ezisobala ngokuya ngenqubo yokukhiqiza kanye nokuceba komkhiqizo. Njengamanje, imakethe ye-BOPET emgqeni wokukhiqizwa okuqondile wokuncibilika kungumugqa omncane wokukhiqizwa kwamafilimu, imvamisa imikhiqizo yefilimu i-Thin BOPET isetshenziswa kakhulu emkhakheni wokupakishwa okujwayelekile. Ingxenye yobukhulu bodwa kuphela engasetjenziselwa endabeni ye-elekhthronikhi. Kodwa-ke, umugqa wokukhiqizwa kwenqubo yokusilika ngumbala wokukhiqiza ifilimu omkhulu. Ngaphezu kokufakwa okujwayelekile, ingasebenza futhi emkhakheni wezimboni zikagesi nezikagesi, izinkundla zokwakha nezicelo ziningi kakhulu, futhi amaqembu wamakhasimende anamandla ngokwengeziwe.
Ngokuthuthuka komugqa we-BOPET wokukhiqizwa kanye nokwenza ngcono ubuchwepheshe, imishini yokuncibilika eqondile ingakhiqiza imikhiqizo eminingi nangaphezulu ngaphansi kwesisekelo sokuncishiswa kwezindleko. Ngo-2005, ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, uFujian Baihong angakhuphula ubukhulu bokukhiqiza kusuka ku-75μ kuya ku-125μ. Imishini emisha ihlelelwe kamuva. Ngaleso sikhathi, izokwazi ukukhiqiza imikhiqizo enobukhulu be-250μ no-300μ. Lesi yisinyathelo sokuvela kwemishini. Ngaphezu kwalokho, umugqa wokukhiqiza we-BOPET ubuye wazuza ukuthuthukiswa kwe-leapfrog ngokuya ngobubanzi: Ukusuka kumamitha ayi-3.2 kuya kwayi-8.7 metres kuya kumamitha ayi-10.4. I-China BOPET imakethe ingxenye yohlelo lwasemuva kwi-3-15 yomugqa we-10.4 m wokukhiqiza, ozovuselela iphethini entsha yomkhakha waseBOPET waseChina.